Wasiir Beyle oo ka hadlay warbixiintii ka soo baxday xafiiska hanti-dhowrka guud ee qaranka
Thursday October 10, 2019 - 23:02:44 in Wararka by Mogadishu Times
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu ka hor yimid warbixin ka soo baxday xafiiska hanti- dhowrka guud ee qaranka. Wasiir beyle ayaa beeniyay Warbixintii uu daabacay Hanti dhowra
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu ka hor yimid warbixin ka soo baxday xafiiska hanti- dhowrka guud ee qaranka. Wasiir beyle ayaa beeniyay Warbixintii uu daabacay Hanti dhowraha guud ee Qaranka, taasi oo ay aheyd in lacagaha qaar aysan kusoo dhicin Qasnada dowladda.
Sidoo Kale Wasiir Beyle ayaa warbaahinta u sheegay in deeqaha Caalamka ee loogu deeqay Soomaliya ay kusoo dhaceen Qasnada dowladda,islamarkaana Hanti dhowrka uusan la tashi la sameyn Gudoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya, waa sida uu hadalka u dhigay.
Maanta ayay aheyd markii Hanti-dhowr guud ee qaranka uu beeniyay in lacag badan la lunsaday, balse uu sheegay in lacagta qaar aysan Ku soo dhicin qasnada Dowladda Soomaaliya